Ividiyo yezeNtlalontle 2013 | Martech Zone
U-Erik ubuyile kunye nefakelo yakhe yamva nje (yesi-4) yevidiyo yakhe eboniswa kwimidiya yoluntu. Ukuba uhlawula ingqalelo, ingxelo nganye yevidiyo yenza umsebenzi omangalisayo wokubonisa utshintsho oluye lwasasazeka kwihlabathi liphela. Nditsho Iparodies ziyamangalisa.
Thelekisa kunyaka ophelileyo Imithombo yeendaba yeNtlalontle ividiyo kwaye uyakufumana uninzi lwamanani olunxulunyaniswa nonxibelelwano lwangempela, lwemali phakathi kweempawu kunye nabathengi.
UErik Qualman ngumbhali waseMelika Ezentlalo, INkokeli yeDijithali kunye neNgxaki. Usisithethi esiphambili samazwe onke esithetha ngenkuthazo yeGen Y, ubunkokeli kwidijithali, imithombo yeendaba yedijithali kunye neendlela ezizayo.
tags: amajelo enkcazeloU-erik qualmanividiyo ye-infographicIiVidiyo zeNtengisoentsha yeendabaumntu ofanelekileyoInguquko kwimithombo yeendaba kwezentlaloezentlaloizibaloividiyo ye-infographic
Indlela eya kwintengiso yanamhlanje
Iglasi eyiBuick Auto
Nov 8, 2012 kwi-12: 36 AM
Ndihlala ndingazishiyi izimvo, kodwa bendicinga ukuba le yindawo entle!